Penzu APK ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Penzu
Penzu APK ကို
Penzu * ကမ္ဘာတဝှမ်းသန်း 1 ကျော်ကအသုံးပြု
မည်သည့် app ကို store မှာ * အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဂျာနယ်
အခမဲ့ဝဘ်နှင့်အခြားမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှ * Sync
Penzu လူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့ဒိုင်ယာရီ, ဂျာနယ်နှင့် notepad ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံခြုံပြီးလုံခြုံဆုံးသင့်ပုဂ္ဂလိကအတွေးများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပါပဲ။ သင်၏မှတ်စုများကမ္ဘာပေါ်မှာနီးပါးမည်သည့် device မှလက်လှမ်းများမှာဘယ်မှာ Penzu ရန်သင့်ဂျာနယ်များထပ်တူပြုပါ။ ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်သင်၏နောက်ကွယ်တွင်သင့်ရဲ့စက္ကူဒိုင်ယာရီထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်သည်ဟုပျော်စရာ!
* Unlimited ဂျာနယ်တစ်စောင်ထုတ်
အခမဲ့ Penzu သည်မိုဃ်းတိမ်နှင့်အတူ * Sync ကိုဂျာနယ်များ
ရေးဖို့ * လက်ခံသတိပေးချက်များ
စကားဝှက်တစ်ခုနှင့်အတူ * Lock ကိုဂျာနယ်များ
* သင့်ရဲ့ဂျာနယ်များ Encrypt
* Add ဓာတ်ပုံများ
PIN ကိုနှင့်အတူ * Lock ကို app ကို
* tags များ Add
* Write အော့ဖ်လိုင်း
Penzu privacy ကိုအာရုံစိုက်သောဒိုင်ယာရီနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂျာနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မူထူးခြားသောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပြုလုပ်အွန်လိုင်းစက္ကူတစ် pad ပါအပေါ်ရေးသားခြင်းသကဲ့သို့လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိရေးသားခြင်းစေသည်။
သင့်ရဲ့ဂျာနယ်နှင့်သင်တို့၏အကြံအစည်အမြဲဝေမျှဖို့ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ် - အချို့သောအမှုအရာပုဂ္ဂလိကဖြစ်လို့ယူဆတယ်ကြသည်! သင်အလိုရှိသမျှရေးချရန် Penzu ကိုသုံးပါ။ ထိုအခါစကားဝှက်တစ်ခု (သို့မဟုတ်တောင်မှစာဝှက်စနစ်) ဖြင့်သင်၏ဂျာနယ် lock ဒီတော့အဘယ်သူမျှမဖတ်ပေမယ့်သင်နိုငျပါသညျ! ထို့အပွငျ, သင်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်မိုဘိုင်း device ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့သောဖြစ်ရပ်အတွက် PIN ကိုအတူတစျခုလုံးကို app ကိုသော့ခတ်နိုင်ပါ။
သည်အခြားဂျာနယ် apps များနှင့်မတူဘဲ Penzu တစ် web-based ရှိသော counterpart ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်သည်မည်သည့် web browser ကိုများနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းမှသင်၏ဂျာနယ်များနှင့်ဒိုင်ယာရီကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ စာအတွေ့အကြုံကိုအင်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်းကိုဒါ Penzu အဆက်မပြတ် updated နှင့်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။
ဒီ app ကို download လုပ်ပါမှအခမဲ့ပေမယ့်ရေးသားခြင်းကိုစတင်နိုင်ရန်အတွက်အခမဲ့ Penzu အကောင့်လိုအပ်သည်။
Penzu Pro ကိုကုန်ကျစရိတ်တစ်လလျှင် $ 4.99 သို့မဟုတ်တစ်နှစ်လျှင် $ 19.99 မှအဆင့်မြှင့်။ သငျသညျကို manually cancel မဟုတ်လျှင်သင့်စာရင်းပေးသွင်းထား Auto-ပြည့်ကြလိမ့်မည်။
မှတ်သားခြင်း, ကနဦးထပ်တူပြုခြင်းနှင့်ဂျာနယ်သော့ဖွင့ပတျဝနျးကငျြအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ထိခိုက်ပျက်ကျများအတွက် * ပြင်ဆင်ချက်များ
* အလိုအလျောက် scrolling မ Fixed, ဒါကြောင့်ရေးသားခြင်းအခါ cursor ကီးဘုတ်နောက်ကွယ်မှဝှက်ထားရပါဘူး
ကီးဘုတ်ပယ်ချအခါ * ရှိစေရန်အတွက် RTE toolbar ကိုဝှက်ထားလျက်ရှိ၏
posts များဖန်တီးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်များအတွက် * အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကကြွယ်ဝသောစာသားကိုအယ်ဒီတာ!
* tags များအဘို့ Fix တစ်ခါတစ်ရံစနစ်တကျ entries တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိမဟုတ်
15.06 ကို MB
Day One ဂျာနယ်